★မြန်မာ့အလင်း★: ကျွန်ဗျူဟာကို စွဲမက်နေတဲ့ နအဖ၊ ဒီမိုနဲ့တတိယလူ
စဉ်းစားတွေးခေါ်လိုတဲ့ မျိုးချစ်မြန်မာများ . . . . အထက်ကဗီဒီယိုကတော့ CIA အကြမ်းဖက်ရေးမှာ ပတ်သက်နေတဲ့ အကြောင်းတင်ပြချက် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်အကူအညီကြောင့် . . . အမေရိကန် အစိုးရ မကောင်းဘူး ၊ အနောက်ဖက် အစိုးရတွေ မကောင်းဘူး ဆိုတာ သိလာပါပြီ။ 9/11 မှာ အမေရိကန်အစိုးရ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်တယ် ဆိုတာ သိနေပါပြီ။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူအခွင့်အရေးဆိုတာကလည်း စာရွက်ပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ စကားလုံးလှလှလေးသာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်း သိလာပါပြီ။ အနောက်ဖက်က မကောင်းဘူးဆိုတော့ တရုတ်ကြီးနဲ့ ရုရှကို လူကောင်းလို့ယူဆမှာလား? (တရုတ်နဲ့ ရုရှက မင်းတို့ရဲ့အဖေအရင်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိထားပါ) ကျုပ်တို့မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဖြစ်တဲ့ နအဖ၊ ဒီမို၊ တတိယလူတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ဟာ ကျွန်ခံရေးဗျူဟာသာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နဲ့အဆင်မပြေရင် အနောက်ဖက်ကို အားကိုးမယ်။ အနောက်ဖက်နဲ့ အဆင်မပြေရင် တရုတ်၊ရုရှနဲ့ နီးစပ်အောင်လုပ်မယ်တဲ့။
ကျုပ်တို့ နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ရပ်တည်ဖို့ထက် ကျုပ်တို့ကို အကာအကွယ်ပေးမယ့် နိုင်ငံကိုပဲ လိုက်ရှာနေပါတယ်။ အဲဒီလမ်းစဉ်ကို ကျွန်ဗျူဟာလို့ပြောတာ လွန်ပါသလားခင်ဗျာ? ကျွန်စိတ်ဓါတ်တွေရှိနေလို့ ကျွန်ဗျူဟာကိုသုံးနေတယ်ဆိုတာ ရှင်းပါတယ်။ ကျုပ်တို့တွေ . . . အခုလိုပဲ ကျွန်ဗျူဟာကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးသင့်လားဆိုတာ စဉ်းစားပါ။ တွေးခေါ်ပါ။ ဒီမိုနဲ့နအဖမီဒီယာတွေက ကျွန်ဗျူဟာအကြောင်း ဘာမှ မတင်ပြတော့ ခင်ဗျားတို့တွေက ဆွေးနွေးချင်မယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာက မိမိဦးဏှောက်ကို အသုံးပြုပြီး စဉ်းစားနိုင်စွမ်းမရှိပါ။ မီဒီယာတွေနဲ့ စာအုပ်ကြီးတွေက အာဘော်တွေကို ၀ါကျပြောင်းပြီး ပြန်ပြောတဲ့အလုပ်ပဲ လုပ်တတ်ကြတာမဟုတ်ပါလား?
ကျုပ်တို့သတိပေးချင်တာက . . . . မြန်မာအချင်းချင်း မိန်းမကြီးတွေလို စောက်တင်းပြောနေတရွေ့၊ ကလေးတွေလို ရန်ဖြစ်နေတရွေ့၊ နိုင်ငံရေးကို ဘေးမှ လက်ပိုက်ကြည့်နေတရွေ့ ၊ ဗမာ, ကချင် , ကယား , မွန် , ရခိုင်ဆိုတဲ့ လူမျိုးရေးတွေ ခွဲခြားနေတရွေ့ . . . . ကျုပ်တို့တွေမှာ ရွေးချယ်စရာ နည်းလမ်းလုံးဝမရှိပါ။ ကမ္ဘာလှည့်ပြီး အမြဲတမ်း ပထွေးရှာနေရမှာပါ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 5:06 AM